Uthotho lwe-HPF yaselwandle ehorizaontal ipleyiti yesikhenkcisi, iChina HPF uthotho lwehorizaontal ipleyiti yesikhenkcezisi yaselwandle Abavelisi, ababoneleli, iFactory-Square Technology Group Co., Ltd.
Olu hlobo lweplanethi yefriji ethe tye yenzelwe ukusetyenziswa kolwandle. Izikhenkcezisi ezinjalo zingasetyenziselwa ukukhenkceza iimveliso ezahlukeneyo kwiitreyi, iipani kunye neebhokisi, ezilungele ukutya kwaselwandle, inyama epakishwe encinci kunye nokunye ukutya kwiibhloko.
● Inokusetyenziswa kunxweme okanye kunxweme.
● Ifriji ingaba yiFreon, iAmmonia okanye i-CO2
● Yenziwe ngamanzi alwandle iAluminiyam enganyangekiyo, inqanaba lokutya. Iplate ye-aluminium engqingqwa engama-25mm inika amandla aphezulu, ukumelana nokubola okuphezulu kunye nokuqhutywa kobushushu. Le ipleyiti ngokuzenzekelayo welding kwaye ubuncinane deformation.
● Indawo ebiyelweyo yesikwere sefriji yintsimbi engenasici. Inokuqinisekisa imeko engqongileyo yolwandle kwaye kulula ukuyicoca.
● I-PTFE evulekileyo-engenakho ukuguquguquka kwamalungu ombhobho. Ithumbu ligutyungelwe ngama-304L intsimbi yesinyithi
I-HPF6 × 1520 2360 1252 1255 I-HPF10 2860 1252 1645 I-HPF12 3360 1252 1875
I-X 2020 I-X 2520
I-HPF7 × 1520 2360 1252 1350 I-HPF11 2860 1252 1760 I-HPF13 3360 1252 2002
I-HPF8 2360 1252 1445 I-HPF12 2860 1252 1875 I-HPF14 3360 1252 2103
I-X 1520 I-X 2020 I-X 2520
I-HPF9 2360 1252 1540 I-HPF13 2860 1252 2002 I-HPF15 3360 1252 2233
I-HPF10 2360 1252 1645 I-HPF14 2860 1252 2103 I-HPF16 3360 1252 2349
I-HPF11 2360 1252 1760 I-HPF15 2860 1252 2233
I-X 1520 I-X 2020
I-HPF12 2360 1252 1875 I-HPF16 2860 1252 2349
I-HPF13 2360 1252 2002
Ukutyeba kwamacwecwe ngumphunga: 25mm; Umgama phakathi kwamacwecwe: 40-90mm
* Ukucaciswa kulungele ukutshintsha ngaphandle kwesaziso, nceda unxibelelane nomthengisi ngaphambi kokubekwa komyalelo.
* Uyilo olulungiselelwe luyafumaneka kwiimfuno ezizodwa.
●Kukulungele ukubambezela iintlanzi, ii-shrimps, inyama, iinkukhu, ukutya okulungiselelwe kwiitreyi okanye kwiibhokisi.